ပါရမီ (၁၀) ပါးမွောကျသော သှေးလှူခွငျး - ဆရာတျောအရှငျဆန်ဒာဓိက - Tameelay
ဆရာတျောအရှငျဆန်ဒာဓိက(ရှပေါရမီတောရ) ရေးသားသာ “သှေးအလှူနှငျ့ ပါရမီဆယျပါး” မှ ထုတျနုတျဖျောပွခွငျးဖွဈပါတယျ။”ဒါန၊ သီလ၊ နက်ေခမ၊ ပည၊ ဝီရိယာ၊ ခန်တီ၊ သစ်စ၊ ဓိဌာန၊ မတ်ေတ၊ ဥပက်ေခာ” ဆိုတဲ့ ပါရမီဆယျပါးအစဉျအတိုငျး အနှဈခြုပျပွောရမယျဆိုရငျ
၁။ သှေး၊ သှေးခံအိတျ၊ ဆေးဝါး၊ အစားအသောကျ၊ မျောတျောယာဉျ၊ ခရီးစရိတျ၊ အမှတျတရဘောလျပငျနျ၊ သော့ခြိတျ၊ လကျကမျးစာရှကျ၊ လကျကမျးစာအုပျ၊ စသညျလှူဒါနျးတာက “ဒါနပါရမီ”
၂။ သှေးကောငျးသှေးသနျ့ဖွဈဖို့ ကိုယျကငျြ့တရားစောငျ့ထိနျးတာ၊ သှေးလှူတဲ့နမှေ့ာ ငါးပါးသီလ အသဈထပျမံဆောကျတညျ ကငျြ့သုံးတာ၊ သှေးလှူပှဲအောငျမွငျဖို့ ကူညီဆောငျရှကျတာ၊ လုပျအားပေးတာ၊ ဝယြောဝစ်ေစလုပျတာက”သီလပါရမီ”
၃။ ကိုယျ့အကြိုး ဘာမှမမြှျောလငျ့တာ၊ ကိုယျ့ခန်ဓာ အသှေးအသားနဲ့ အလှအပအပျေါ တှယျတာတပျမကျမှုကို စှနျ့လှတျနိုငျတာက”နက်ေခမ်မပါရမီ”
၄။ သှေးအလှူနဲ့ပတျသတျတဲ သိသငျ့သိထိုကျတာတှကေို သိအောငျလလေ့ာတာ၊ သိပွီးသားမြှဝတောက”ပညာပါရမီ”
၅။ သှေးအားပွညျ့အောငျနဲ့သှေး အလှူပွီးစီးသှားအောငျ ကွိုးစားအားထုတျနတောက”ဝီရီယပါရမီ”
၆။ အသားနာခွငျး၊ အပူဒဏျ၊ အအေးဒဏျ၊ တနျးစီရမှု၊ ဆာလောငျမှု၊ အခကျအခဲ၊ ပွသာနာ၊ အဆငျမပွမှေု၊ စိတျတိုငျးမကမြှု စတာတှကေို သညျးခံတာက “ခန်တီပါရမီ”
၇။ လှူမယျပွောထားတဲ့အတိုငျး တကယျလှူတာ၊ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုပုံစံစာရှကျမှာ အမှနျအတိုငျးဖွညျ့တာက”သစ်စာပါရမီ”
၈။ ဘာအကွောငျးကွောငျ့မှ သှေးလှူတဲ့အလုပျကို အပကျြမခံတာ၊ ဆုံးဖွတျခကျြခိုငျမတာက”အဓိဌာနျပါရမီ”
၉။ လူနာရောဂါပြောကျစခေငျြတာ၊ အသကျရှငျစခေငျြတာ၊ လုပျစရာရှိတဲ့ အလုပျကောငျးတှေ ဆကျလုပျစခေငျြတာ၊ လူနာကို မတ်ေတာပို့သနတော၊ လူနာနဲ့ပတျသတျတဲ့အသိုငျးအဝိုငျးတဈခုလုံး စိတျခမျြးသာစခေငျြတာက”မတ်ေတာပါရမီ
၁၀။ ခဈြသူ၊မုနျးသူ မခှဲခွားတာ၊ အကောငျး၊အဆိုး တနျပွနျသကျရောကျမှုအပျေါ လုံးဝမတုနျလှုပျတာ၊ ကြေးဇူးသိခွငျး၊ မသိခွငျးကို လုံးဝထညျ့မတှကျတာ၊ ကိုယျ့အလုပျကိုယျပွီးအောငျလုပျတာ၊ ကိုယျ့တာဝနျကိုယျကအြေောငျ ဆောငျရှကျတာက “ဥပက်ေခာပါရမီ”.
အဲဒီလိုအားဖွငျ့… သှေးအလှူပေးလှူနတောဟာ ပါရမီဆယျပါးလုံးကိုဖွညျ့ကငျြ့နတောပါ
အရညျအသှေးပွညျ့ဝတဲ့စံခြိနျမီသှေးအလှူဖွဈအောငျ စိတျထားတတျတတျ၊ စိတျထားမွတျမွတျနဲ့ ပေးလှူရငျပေါ့လေ…
ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရ) ရေးသားသာ “သွေးအလှူနှင့် ပါရမီဆယ်ပါး” မှ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”ဒါန၊ သီလ၊ နေက္ခမ၊ ပည၊ ၀ီရိယာ၊ ခန္တီ၊ သစ္စ၊ ဓိဌာန၊ မေတ္တ၊ ဥပေက္ခာ” ဆိုတဲ့ ပါရမီဆယ်ပါးအစဉ်အတိုင်း အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်
၁။ သွေး၊ သွေးခံအိတ်၊ ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ခရီးစရိတ်၊ အမှတ်တရဘောလ်ပင်န်၊ သော့ချိတ်၊ လက်ကမ်းစာရွက်၊ လက်ကမ်းစာအုပ်၊ စသည်လှူဒါန်းတာက “ဒါနပါရမီ”
၂။ သွေးကောင်းသွေးသန့်ဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ကျင့်တရားစောင့်ထိန်းတာ၊ သွေးလှူတဲ့နေ့မှာ ငါးပါးသီလ အသစ်ထပ်မံဆောက်တည် ကျင့်သုံးတာ၊ သွေးလှူပွဲအောင်မြင်ဖို့ ကူညီဆောင်ရွက်တာ၊ လုပ်အားပေးတာ၊ ဝေယျာဝေစ္စလုပ်တာက”သီလပါရမီ”
၃။ ကိုယ့်အကျိုး ဘာမှမမျှော်လင့်တာ၊ ကိုယ့်ခန္ဓာ အသွေးအသားနဲ့ အလှအပအပေါ် တွယ်တာတပ်မက်မှုကို စွန့်လွှတ်နိုင်တာက”နေက္ခမ္မပါရမီ”
၄။ သွေးအလှူနဲ့ပတ်သတ်တဲ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို သိအောင်လေ့လာတာ၊ သိပြီးသားမျှဝေတာက”ပညာပါရမီ”
၅။ သွေးအားပြည့်အောင်နဲ့သွေး အလှူပြီးစီးသွားအောင် ကြိုးစားအားထုတ်နေတာက”၀ီရီယပါရမီ”
၆။ အသားနာခြင်း၊ အပူဒဏ်၊ အအေးဒဏ်၊ တန်းစီရမှု၊ ဆာလောင်မှု၊ အခက်အခဲ၊ ပြသာနာ၊ အဆင်မပြေမှု၊ စိတ်တိုင်းမကျမှု စတာတွေကို သည်းခံတာက “ခန္တီပါရမီ”
၇။ လှူမယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်း တကယ်လှူတာ၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပုံစံစာရွက်မှာ အမှန်အတိုင်းဖြည့်တာက”သစ္စာပါရမီ”
၈။ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ သွေးလှူတဲ့အလုပ်ကို အပျက်မခံတာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မတာက”အဓိဌာန်ပါရမီ”
၉။ လူနာရောဂါပျောက်စေချင်တာ၊ အသက်ရှင်စေချင်တာ၊ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်ကောင်းတွေ ဆက်လုပ်စေချင်တာ၊ လူနာကို မေတ္တာပို့သနေတာ၊ လူနာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုလုံး စိတ်ချမ်းသာစေချင်တာက”မေတ္တာပါရမီ
၁၀။ ချစ်သူ၊မုန်းသူ မခွဲခြားတာ၊ အကောင်း၊အဆိုး တန်ပြန်သက်ရောက်မှုအပေါ် လုံးဝမတုန်လှုပ်တာ၊ ကျေးဇူးသိခြင်း၊ မသိခြင်းကို လုံးဝထည့်မတွက်တာ၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ပြီးအောင်လုပ်တာ၊ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေအောင် ဆောင်ရွက်တာက “ဥပေက္ခာပါရမီ”.
အဲဒီလိုအားဖြင့်… သွေးအလှူပေးလှူနေတာဟာ ပါရမီဆယ်ပါးလုံးကိုဖြည့်ကျင့်နေတာပါ
အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့စံချိန်မီသွေးအလှူဖြစ်အောင် စိတ်ထားတတ်တတ်၊ စိတ်ထားမြတ်မြတ်နဲ့ ပေးလှူရင်ပေါ့လေ…
ဒုက်ခမမြားစခေငျြဘူးဆိုရငျ အားလုံးအပျေါမှာ ခပျစိမျးစိမျးပဲ နလေိုကျပါ….